Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 15/11/2020)
Ntuziaka na-asụ Bekee ga-ezute gị na Abụọ ụlọ mbikọ n'obodo ochie n'ihi na 2.5 awa’ ịgagharị gburugburu Prague. Ga-amalite njem njegharị na ama ochie Old Town, gaa n'ihu na akara ngosi Charles Bridge. Site na etiti ndi njem nleta rue ebe kachasi nma n’obodo maka nri ehihie na mmanya, Prague si eme ma ghara ime, ị ga-emecha njem ahụ na ọtụtụ ndụmọdụ na akụkọ ị na-agaghị agụ na akwụkwọ ntuziaka.
Na mgbakwunye na akụkọ ihe mere eme, Berlin na-enye njegharị dị iche iche ga-egosi Berlin site n'akụkụ dị iche iche; nka, foodie, ma ọ bụ ihe ọ drinksụ drinksụ’ hiwere isi. na Original Berlin free obodo na-eje ije njegharị, ị ga-eleta 6 nke ama ama di na Berlin, ma nụ banyere akụkọ dị n'azụ mgbidi na ọdịbendị nke Berlin.
Na mgbakwunye na nnukwu ndu na ọchị, Zurich kacha mma free obodo na-ejegharị njegharị bụ culinary heaven. Ihe mere ị ga-eji gafere obodo ochie na Zurich pụta ìhè na ụdị ọdịnala, mgbe ị nwere ike ose ya na Chineke Switzerland chocolate. Ire truffles, mụta maka mmịpụta koko ma gaa na chocolatiers kacha mma na Europe ka ị masịrị Lindenhof na ụka Grossmunster.
You chọrọ Embed anyị blog post “7 Best Free Walking Tours In Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)